नजिक न्युज | कोभिडबाट संक्रमण मुक्त भएकाले के–के कुरामा ध्यान दिने ?
कोभिडबाट संक्रमण मुक्त भएकाले के–के कुरामा ध्यान दिने ?
नेपालमा कोरोना संक्रमणको जोखिम अझै जारी छ । संक्रमितको संख्यालाई हेर्ने हो भने दैनिक २००० सम्म संक्रमित पुगिसकेका छन् । कोरोना भाइरसको संक्रमण अझै सुस्त भएको छैन । एउटा सकारात्मक कुरा के छ भने पछिल्ला दिनहरूमा दैनिक संक्रमित हुने बिरामी र कोरोना मुक्त भएर निको हुनेको संख्या हाराहारीमा पुगेको छ । यद्यपि सरकारले १४ दिनपछि परीक्षण नगरी घर पठाउने नीतिका कारण पनि धेरै संक्रमित डिस्चार्ज हुने गरेका छन् । त्यसैले कोरोना भाइरसबाट रिकभर भएर अस्पतालबाट डिस्चार्ज गरिनुको मतलब उनीहरूमा संक्रमणको खतरा ट¥यो भन्ने चाहिँ होइन ।
विश्वभरि लाखौं यस्ता घटनाहरू समेत देखिएको छ जसलाई निको भएपछि पनि पुरानै लक्षण देखिएर फेरि अस्पताल भर्ना गर्नुपरेको छ । कोभिड १९ एक भाइरस संक्रमित रोग हो । यो भाइरस संक्रमणको क्षति देखिन केही दिनदेखि केही हप्तासम्म लाग्ने गर्छ । तसर्थ, कोभिड १९ का संक्रमितहरूले अस्पतालबाट डिस्चार्ज भए पछि वा घरमै आइसोलेसनमा बसे पनि कम्तीमा १० दिनसम्म यी चीजहरूमा ध्यान दिनुपर्छ ।
पहिलो र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा यो हो कि अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएपछि पनि कम्तीमा अर्को १० दिन तपाईं डाक्टर वा अस्पतालका कर्मचारीहरूसँग नियमित सम्पर्कमा रहनुहोस् । आफ्नो साथमा अक्सिमिटर राख्नुहोस् र दैनिक २–३ पटक अक्सिजनको मात्रा परीक्षण गर्नुहोस् । शरीरमा अक्सिजनको स्तर कुनै पनि हालतमा ९४ प्रतिशतभन्दा कम हुन दिनुहुँदैन । यदि अक्सिजनको स्तर कम भयो भने तुरुन्त अस्पताल लैजानुपर्छ ।
शुक्रबार ०९, असोज २०७७ ०९:२० मा प्रकाशित